Dhiimma Daangaa Oromiyaa Ilaalchiisee | Horn Affairs Afaan Oromo
By Kiyya Hararghe on August 21, 2017
Yaada kabajamoo Pir. BMNO Obbo Lammaa Magarsaa keennan
Waan bu’uuraa hiiknee jirra, kan Somaalees haa tahu, kan Beenishangul gumuuz haa tahu kanneen kaaniis dabalatee. Maalii kan amma jiru? Oloola adda addaa lafa dabarsanii gurguranii… eebaluu fa’ii akkas godhanii, ammallee waraanatuu jira, jechuun kan hafarsuu baayyee dha, maaliif…
Ajandaa argachuuti qaba waan taheef, Nagadachudhaaf, atteenshiinii argachudhaaf, daldallii akkasii jiraachudhaaf ajandaan kun jiraachuuti qaba, du’uu hin qabu ajandaan kun, dhimmi daangaa kun akka duutuu hin barbaadamu. Nutii immoo Totally ajjeessudhaaf kan nutii hojjachaa jirru.
Hojii guddaan bara kana hojjannee keessaa hojii dhiimma daangaa ti. Namnii waggaa kudhan kana keessa mana keessaa waliin turre lubbuun namaa daangaa Oromiyaa irratti guyya guyyaan akka innii itti dhangala’aa ture, dhumaa ture hundii keenya ni beekna. Harargee keessa qofattii waggoota kurnan dabarsiinee lubbuun namaa dhibbatamaan osoo hin tahiin kumaatamaan dhumaa kan ture daangaa irratti.
Yoom hiikne, eenyutuu itti bu’ee hiikee? Yoom hiiknee miti, ajandaadhuma siyaasaa godhatee qabatee ittii bu’ee fallii maali jedhe eessatti, yoomii irrattii mari’atee? Galma kana keessatti wal gahama, ijoolleen harargee irraa dhuftu fallii maalii jettii, ni gaafatti ni iyyama, ni galtii, dhume.
Dhiimmii daangaa walxaxaa baayyee qaba. Siyaasa baayyeetu keessa jira, diraamaa baayyetuu keessa jira. Hojii guddaa hojjannee jirra. Hojii guddaa hojjannee keessaa kan biraa haa hafuutii lubbuu namaa daangaa irrattii guyyaa guyyaan dhabamu hambiifnee jirra. Lubbuu nama sababa innii meeshaa qabu dhufee ajjeesee deebi’aa ture harargee keessattiis, baalee keessattiis boorana keessattiis eessattiyyu yoo xinnaatee xinnatee hambiifnee jirra.
Waa’ee daangaa keessattii namni harka keessaa hin qabnee hin jiru, namni ittiin hin nagadanne hin jiru. Namni hojii keenya balleessudhaaf (gurracheessudhaaf) achii keessatti waa baayyee hojjachaa ture baayyeetu jira. Inummayyu Akkaan ani ilaalutti karaa bilchiina qabuun, tooftaa cimaadhaan hojii hojjanne keessaa, hojii hojjannee qofa osoo hin taanee kan ittii milkoofnee (Successful) ittii taanee keessaa innii tokko hojii daangaa irratti hojjannee dha.
Lafa Harargee keessattiis haa tahu, eessatti lafa referadamiidhaan murtaa’ee seera qabeessa goonee, referandamiidhaan laftii murtaa’ee gara murtaa’eetti haa galtuu, kan referandamiidhaan hin murtaa’iin immoo haala qabatamaa lafa irra jirun, uummata lafa irra jiruun waliin ilaalamee akka innii hiikkatu, baayyee isaas callifnetuma as Adaamaadhuma ykn Finfinnee irra teenyee kan hojjanne osoo hin tahiin jaarsoollii gadii jiran, ummata keessa jiran, beekan hirmaachisuudhaan baayyeen isaa kan hojjatame.
Waan waliif gallee sana, waan seeraan waliif gallee irrattii mallatteessinee sana amma bulchiinsa ijaarudhaaf yommuu jalqabnu iddo tokko tokkotti mandara keessatti as qabuu fi achii qabuun ni jira. Kun immoo akka nu muddachuu danda’uu durummaayyuu tilmaamnerra nutii.
Haa tahuutii Waan irrattii waliif galle sana hanga dhumaattitti eenyuus iyyee, eenyuus maal jedhe xumursiisuu danda’uutu nurra jiraata lafa irratti. Xumursiisuu qabna. Hojjatamaa jira baayyeen isaa guyya guyyaa ti. Akkataan nutii itti hojjannu rakkoo qaba, uummata marisisuudhaan, hubachisuudhaan gad-jallaatti akkii ittii hojjatamu rakkoo qaba. Haa tahuuti garuu, tokkoffaa, waan irrattii waliif galle sana irratti hamma danda’ameetti bifa bilchiina qabuun rakkoo hiikuu qofa osoo hin tahiin fedhii (interest) uummata keenyaa karaa eegsiisuu danda’uun ilaalleti waliigaltee sana kan mallatteessine.
Lafa irrattiis kana dha hojjatamuudhaaf kan adeemuu. Kana dha wantii biraa hin jiru. Garuu, asiin yeroo tokko of irraa ajjeeftu asiin immoo waan biraatu siif dhufa. Asii yeroo atii kaatuu asiin immoo waan biraatu siif qophaa’aa, diggisii biraatu jira. Homaa tokko gochuu hin dandeessu, hamma innii kaniis nurratti haa hojjatu, maaliis haa qophaa’uu, rakkooniis haa jiraatu, rakkoo sana ilaallee hikuudha akkuma dhufaatii isaatti. Akka amala amala isaattii hikkuu dha. Abbaan barbaade kan barbaade haa odeessu, Haa hasa’u.
Waa’een daangaa eessatti ka’ee beeka? Somaalee waliin gutummaati hojjanne barana, gutummaatti Except Moyyaalee. Gambeellaas, beenishaanguuliis harkaa 99 fixnee jirra, Amaara waliiniis Baha Shawaa keessa kan jiru parsantaa torbaatama, saddettama xumurree jirra, yeroo dhiyoo keessatti fixnee keessaa baana.
Yoo atii akkasitti xumurtuu immoo iddoo waa tokko kosh jedhee hin beekneetti waan biraatu dhalata. Maaliif? Ammallee Oromiyaan rakkoo keessa jiraa, rakkoo keessaa bahaa hin jiruu, rakkoo keessaa bahuu hin danda’uu jedhanii odeessisisudhaafi. Kanaaf, waa’ee daangaa irratti hojiin guddaan hojjatamee jira. Haa hafuu innii kaan, rakkoon hin jiruu miti, Lubbuun nama daangaa irra jiru baraaruun danda’amee jira.
Daangaa keenya akkamitti bulchiina isa ilaaluu dha. Akkamitti hogganaa turre isa ilaaluu dha. Rakkoo daangaa amma Harargee keessatti jennuu baayyee isaa Somaaleetu nutti fidee miti, rakkoo caasaan keenya akka hin taaneetti waan hin taanee hojjachaa ture dha baayyeen isaa. Tokko tokko aanaa irra taa’ee lafa dabarsee kan gurgureetu jira. Uummata akkamitti gurgura, ganda akkamitti gurgura namni? Mallatteesse kan keennefitu jira.
Baayyeen isaa kan of irratti hojjanee dha, ammallee dafnee akka nutii keessaa hin baanee kan nuu rakkisaa jiran. Haa tahuutii garuu ni xumurama. Hojii hunda keenyaa gaafata waan taheedhaafi. Kana keessatti rakkoon adda addaa ni jira caasaa keenya keessaas. Hojii guddaa namnii ganda bulchuu sun, aanaa bulchuu sun hojii kootii jedhee eerga daangaa bulchuu hin dandeenye waan biraa bulchuu hin danda’uu, kana gochuu irrattii rakkoon ni jira ammallee.
Waa’ee lafaa irratti dhiibee sodaa /phobia/’n Oromiyaa keessa jiru rakkoon tokko jira. Baadiyyaas deemaa, magaalaas deemaa… laftii kan jiru Oromiyaa keessa, hanqiina hoggansii Oromiyaa qabu immoo ni beeka innii kaan. Maalaqa xinnaa ittii keennee miti laaqana gaarii yoo afeeree waan baayyee akka innii gochuufii danda’uu ni beeku.
Qubattoonni bakka adda addaatii dhufanii seeraa ala qubatan qonna qixxee kan qochiisifatuu caasaa keenya. Ciinaqsan irratti bar bulchaa aanaati jenne galma Abbaa Gadaatti ta’ee otuu nu waliin marii’atu, dabarfamee lafa Jigjigaatii fudhatee Jigjigaa keessatti kan mana ijaarattu, Baabbileetti mitii ykn Haroomaayatti mitii mana kan ijaaratte, galmii koo achii jedhe waan yaadudhaafi.
Waan meeqa hojjateefii, waan meeqa mijjeessefii. Akkas godhee akkas gochaa turee, gaafa rakkoon dhita’ee dho’uu immoo maal jedha? Mootummaan hiikuu dadhabee jedha. Mootummaan sun eenyu innii? Eerga innii mootummaa hin taane bulchaan gandaa sun, bulchaan aanaa sun, kabineen aanaa sun mootummaa eerga hin taanee mootummaa biraatu jiraa?
Aanaa keenya keessattii fi ganda keenya keessatti dhufee rakkoo kan nurraa hiiku, yoo nutii lafa sirnaan bulfachuu dadhabne, sirnaan hogganuu dadhabne, faayidaa yerodhaaf nu xalafee nu kuffisu bira darbuu yoo dadhabne eenyutuu nu hiikuu danda’a? mootummaan hiikuu dadhabee jedhan, rakkoon akkasii ni jira caasaa keenya keessa, hamma har’aatti otuu hin hafiin. Isa ilaaluun baayyee barbaachisaa dha!